prudential insurance company(prudential insurance company) in Bizshala: Business, economic and financial news of Nepal -
प्रूडेन्सियल इन्स्योरेन्सको सेयर सस्तोमै पाउने अवसर छुट्ला नि !
काठमाण्डौ । प्रूडेन्सियल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमीटेडको सेयर सस्तोमै पाउने अवसर खुलेको छ । यो कम्पनीले आगामी फागुन २८ गतेदेखि १२ हजार ५ सय ३ कित्ता सेयर लिलामीबाट बिक्रीका लागि बोलपत्र आह्वान गरेको हो । यो कम्पनीले गत पुस १६ गतेदेखि माघ २१ ग्तेसम्म ३० प्रतिशतको दरले हकप्रद सेयर निश्कासन गरेको थियो । सो क्रममा बिक्री नभएको कित्ता...
प्रूडेन्सियल इन्स्योरेन्सको हकप्रद निश्कासन, आस्वाबाट पनि आवेदन दिन सकिने
काठमाण्डौ । प्रूडेन्सियल इन्स्योरेन्स कम्पनीले आज(पुस १६ गते)देखि हकप्रद सेयरको बिक्री खुल्ला गरेको छ । कम्पनीले १ कित्ता सेयर बराबर ०.३० कित्ताको दरले हकप्रद सेयर निश्कासन गरेको हो । कम्पनीले १०० रुपैयाँ अंकित दरका कुल १२ लाख ८३ हजार ४० कित्ता सेयरको बिक्री खुलाएको छ । इच्छुक सेयरधनीले माघ २१ गतेभित्र तोकिएको स्थानबाट हकप्रद खरीदका...
पुस १६ देखि प्रूडेन्सियल इन्स्योरेन्सको हकप्रद, आस्वाबाट पनि आवेदन दिन सकिने
काठमाण्डौ । प्रूडेन्सियल इन्स्योरेन्स कम्पनीले अगाामी पुस १६ गतेदेखि हकप्रद सेयरको बिक्री खुल्ला गर्ने भएको छ । कम्पनीले १ कित्ता सेयर बराबर ०.३० कित्ताको दरले हकप्रद सेयर निश्कासन गर्न लागेको हो । कम्पनीले १०० रुपैयाँ अंकित दरका कुल १२ लाख ८३ हजार ४० कित्ता सेयर बिक्री गर्नेछ । इच्छुक सेयरधनीले माघ २१ गतेभित्र तोकिएको स्थानबाट...
बैंक र बिमा कम्पनीमा जागिरको बग्रेल्ती अवसर
काठमाण्डौ । पछिल्लो समय बैंक र बिमा कम्पनीहरुमा जागिरको बग्रेल्ती अवसरहरु खुल्न थालेका छन् । दिनहुँजसो आफूलाई आवश्यक जनशक्ति माग गर्दै कम्पनीहरुले आवश्यकता सम्बन्धी सूचना प्रकाशित गर्न थालेका छन् । बुधबार पनि सिद्धार्थ बैंक, प्रूडेन्सियल इन्स्योरेन्स र गरिमा विकास बैंक लिमीटेडले कर्मचारी माग गर्दै सूचना प्रकाशित गरेका छन्...
सिद्धार्थ र प्रूडेन्सियलले २०% बोनस दिने
काठमाण्डौ । सिद्धार्थ इन्स्योरेन्स र प्रूडेन्सियल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमीटेड आर्थिक वर्ष २०७३ ७४ को नाफाबाट २० प्रतिशतको दरले बोनस सेयर वितरणको निर्णय गरेका छन् । सिद्धार्थ इन्स्योरेन्सको बोर्ड बैठकले २० प्रतिशत बोनस सेयर वितरणको निर्णय गरेको हो । हालै यो कम्पनीले १९.२३ प्रतिशत हकप्रद निश्कासन गरेको थियो । २० प्रतिशत बोनस सेयर...
प्रूूडेन्सियल इन्स्योरेन्सको कमालको प्रगति : जगेडाकोषमा उल्लेख्य वृद्धि, इपीएस राम्रो
काठमाण्डौ । प्रूडेन्सियल इन्स्योरेन्स कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा १७ करोड १३ लाख खूद नाफा आर्जन गरेको छ । अघिल्लो वर्ष यस्तो नाफा १५ करोड ३२ लाखमा सीमित थियो । समीक्षा अवधिमा कम्पनीले ३५ करोड १२ लाख खूद बिमा शुल्क आर्जन गरेको छ । अघिल्लो वर्ष यस्तो आम्दानी ४९ करोड ८५ लाख थियो । कम्पनीले यो अवधिमा ३८ करोड ५६ लाख बढीको दाबी भुक्तानी...
प्रूडेन्सियलले ३० प्रतिशत हकप्रद बिक्री गर्ने
काठमाण्डौ । प्रूडेन्सियल इन्स्योरेन्स कम्पनीले ३० प्रतिशत हकप्रद निश्कासनका लागि धितोपत्र बोर्डमा आवेदन दिएको छ । यो बिमा कम्पनीले साउन २० गते हाल कायम चुक्तापूँजीको ३० प्रतिशतको दरले हकप्रद निश्कासनको माग गर्दै आवेदन दिएको हो । कम्पनीले एकसय रुपैयाँ अंकित मूल्यका कुल १२ लाख ८३ हजार ४० कित्ता हकप्रद निश्कासनको माग गरेको हो...
प्रूडेन्सियल इन्स्योरेन्सका लगानीकर्ताको दुवै हातमा लड्ड !
काठमाण्डौ । प्रूूडेन्सियल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमीटेडले आफ्ना सेयरधनीलाई २० प्रतिशत बोनस सेयर र ३० प्रतिशत हकप्रद वितरणको घोषणा गरेको छ । सोमबार बसेको कम्पनीको १६२ औं बोर्ड बैठकले आर्थिक वर्ष २०७२/७३ को नाफाबाट सेयरधनीलाई २० प्रतिशत बोनस सेयर र कर प्रयोजनका लागि १.०५ प्रतिशत नगद लाभांश वितरणको निर्णय गरेको हो । बैठकले त्यसपछि ३०...